Dhisida adkeysiga badan ee Minneapolis Survey
Dhisida adkeysiga badan ee Minneapolis
Minneapolis waxay ka shaqeyneysaa inay si wanaagsan ugu diyaarsanaato maanta caqabaddaha weyn ee caasimada iyada oo la hormarinayo xeelada adkeysiga.
Minneapolis waxay u sameyneysaa shaqadaan sida xubinta 100 Caasimadaha Adkeysiga (100RC), shabakada caalamka ee 100 Caasimad waxaa bilaabay Rockefeller Foundation si loogu caawiyo caasimada inay dhisaan adkeysigooda ee naxdinta iyo murugada qarniga 21aad.
WAA MAXAY ADKEYSIGA CAASIMADA?
Adkeysiga Caasimada waa kartida shaqsiyaadka, bulshooyinka, machadyada, ganacsiyada, iyo nidaamyada ee gudaha caasimada lagu badbaadayo, laqabsiga, iyo hormarinta, dhibaato malahan murugada raagto iyo naxdinta daran ee ay la kulmaan. Adkeysiga Caasimada waxay ku saabsantahay wanaajinta caasimada, oo labadaba ah waqtiyada xun iyo waqtiyada wanaagsan, oo faa’idada muwaadaniinta oo dhan, gaar ahaan saboolka iyo nuglaanta.
MURUGADA RAAGTO waxay u liidisaa caasimada si ku saleysan maalin ku maalin (tusaale ahaan, sinnaan la’aanta qaabeysan, kaabayaasha gaboobo, isbadelka cimilada, rabshada hubka).
NAXDINTA DARAN waa dhacdooyin lama filaanka ah ee halista galisaa dadka joogo caasimada (tusaale ahaan, duufaanta, fatahaada, weerarka intarneetka, burburka dhaqaalaha, guuldarada kaabayaasha).
WAA MAXAY UJEEDADA SAHANKAAN?
Heerka ugu horeeyo ee nidaamka xeelada dadka dagan waa sawirka caqabadaha adkeysiga iyo fursadaha Minneapolis. Sahankaan, oo ay la jiraan ka qeybgalka bulshada iyo cilmi baarista waxay ka qeybtahay adkeysiga sawirka. Hadafkeena waxaa loogu tallogalay xeelada adkeysiga ee muujinayo aragtiyada iyo baahiyada dadka Minneapolis.
Sahankaan waxaa loo naqshadeeyay inuu aruuriyo aragtiyada dadka kala duwan ee ku saabsan caqabadaha adkeysiga ee Minneapolis, gaar ahaan naxdinta iyo murugada ee walaaca ugu weyn ee bulshadeena, sidoo kale sida aqoonsiga shaqada adkeysiga oo mar hore ka dhaceyso Minneapolis.
Waad ku mahadsantahay buuxinta sahankaan gaaban oo 15-daqiiqo ee ogeysiiyo xeelada adkeysiga. Jawaabaha sahankaan waa qarsoodi.